Muuri News Network » Daawo:Ciidamadii ugu badnaa oo Garoowe loo daad gureeye iyo cabsi dhanka Amniga MD Farmaajo
Daawo:Ciidamadii ugu badnaa oo Garoowe loo daad gureeye iyo cabsi dhanka Amniga MD Farmaajo
Madaxweynaha dawlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa Ciidankii ugu badnaa la iman doona Puntland, ka dib markii uu shaki ka muujiyay Ciidamada Badda Puntland ee ay tababaraan Imaaraatka Carabta.
Warbaahinta ayaa helay Xog ah in Ciidamada uu Madaxweynaha Soomaaliya la iman doono ay gaarayaan illaa 50 Askari oo ka tirsan Ciidanka NISA iyo Gaashaan ee Soomaaliya, kuwaas oo si gaar ah u sugaya amniga Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas ayaa aqbalay soo jeedin uu u diray Madaxweynaha Soomaaliya oo ah inay la iman doono Ciidamo gaar ah oo aad u tababaran, waxaana Ciidamada uu wato sido kale qayb ka noqon doona Ciidamo Amisom ka tirsan oo kooban.
Farmaajo ayaa noqonayaa Madaxweynihii ugu horeeyay ee soo mara dawl;ada Soomaaliya oo Ciidamo intaas le’eg la imanaya magaalada Garowe ee Caasimada Puntland.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe ee Caasimada Puntland, ayaa aad u hadal haya arrintan oo ah id ku cusub Soomaaliya.
Madaxda Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta, ayaa waxaa khilaafkoodu uu gaaray meel aad u saraysa, waxaana xaaaldu ay hadda maraysaa in la isku tuhmo dilal qorshaysan.